Maxay tahay sababta ay Itoobiya u taageereyso Dowladda Farmaajo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Maqaallo Maxay tahay sababta ay Itoobiya u taageereyso Dowladda Farmaajo
Tan iyo intuu xukunka qabtay mudane Abiy Axmed, waxaa muuqday isu soo dhawaansho labada dowladood ah. Waxaa abuurmay jawi Isfahan oo u muuqday mid ku dhisan is qaddarin iyo sinnaan. Waxaa billowday wadahadallo ku saabsan midaynta dhaqaalaha iyo fududaynta isu socodka dadka. Waxay guda galeen dhisidda isbahaysi saddex geesood ah oo labadaan dal iyo Eritareeya ku midaysan yihiin.
Sidaas darteed wuxuu u baahan yahay dhowr sano oo is dhabbarin ah. Siyaasadda noocaan Abiy uma horreeyo. Meles Itoobiya waxaa uu qabsaday 1991’di. Afarti sano ee u horraysay wax tallaabbo ah ma uusan qaadin. Itixaad hubaysan oo dagaal kula jiray ayaa Godey iyo meelo kale daggaana isha ayuuna ka daawanayay. ONLF meel walba ayay hubkeeda ku haysatay. Soomaaliya warkeedaba daa oo xataa salaan uma uusan diri jirin.
AFEEF: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Muqdisho Online
Previous articleHay’adihii dowladda oo ka cabanaya musuqa & laaluushka Radiyaha & TV Qaranka
Next articleKenya oo u hambalyaysay shacabka Jubbaland iyo MW Axmad Madoobe (Aqriso)